महरा सरलाई हैन पत्रकारलाई हिरासतमा लिएर छानबिन गरी बक्सियोस् सरकार ! – Durbin Nepal News
अशोज १५, २०७६ २:२२ मा प्रकाशित
उसताकाको राजा जत्तिकै शक्तिशाली सभामुख महाशयलाई ‘जबरजस्ती करणी’को गम्भीर आरोपमा रोशनी शाहीलाई उक्साएर सामाजिक सञ्जालमा सन्सनी फैलाउने पत्रकारलाई किन कारबाही नगर्ने ?पत्रकारलाई तुरुन्त हिरासतमा लिएर छानबिन गरी बक्सियोस् सरकार !
निर्मला पन्तहरू मर्दा किन टाउको दुख्छ यी पत्रकारहरूलाई ? पुडासैनीहरू पासोमा झुन्डिएर मर्छन्, यिनै पत्रकारको नीद हराम हुन्छ।कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाँउमा !दुनियाँलाई नभएको चासो किन यिनै पत्रकारहरूलाई हुन्छ?
श्री १० सरकारले बोलाएको पत्रकार सम्मेलनमा जानु , सरकारको आदेश र निर्देशन सुन्नु , दिएको खानु , लुरुलुरु कार्यकक्षमा फर्किएर “स्तुती समाचार “ सम्प्रेषण गर्नु नि ! किन मनमा लागेको बिचार लेख्नु परेको ?किन आँखाले देखेको बोल्नु परेको ? तातो र छारो ! काम छैन बुहारी पाडाको पुच्छर उचाल् भनेरै दुनियाँलाई सुसूचित गर्ने ठेक्का लिएझैँ गर्छन् यिनीहरू त गाँठे!
किम जोङ उन को फेला परौला है पत्रकारहरू , होस गरेस् । सरहरूको राज छ क्या ।
दुई तिहाइ , तिन तिहाइ र चार तिहाइको लौरोले ठटाउनु पर्ने यी पत्रकारहरूलाई !